यसरी बन्दैछ फेरि लोडसेडिङ गर्ने डिजाइन । यस्तो छ तयारी । कुलमान भन्छन् यो सबै सेटिङ हो (भिडियो हेरि प्रतिक्रिया दिनुहोला) -
Home News यसरी बन्दैछ फेरि लोडसेडिङ गर्ने डिजाइन । यस्तो छ तयारी । कुलमान...
यसरी बन्दैछ फेरि लोडसेडिङ गर्ने डिजाइन । यस्तो छ तयारी । कुलमान भन्छन् यो सबै सेटिङ हो (भिडियो हेरि प्रतिक्रिया दिनुहोला)
यसरी बन्दैछ फेरि लोडसेडिङ गर्ने डिजाइन । यस्तो छ तयारी । कुलमान भन्छन् यो सबै सेटिङ हो
सोमबार नै विराटनगरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशसभा पनि विघटन हुने सम्भावना रहेको बताएकी थिइन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेकाले संविधान, प्रदेशको ऐन, नियमावलीअनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । ओलीलाई निकट नेताहरुको पनि सबै विकल्पमा अगाडि बढ्न सुझाव छ । केही दिनअघि नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि अर्को पक्षको कदम हेरेर प्रधानमन्त्रीले थप कदम चाल्ने बताएका थिए ।
Previous articleभटा’भट उड्यो चिनियाँ फा’इटर विमान, चिनियाँ राष्ट्रपतिको यस्तो आ’देशपछि भारतमा खै’लाबैलाः अ’त्तालिए मोदी
Next articleबिनयले माफी मागेपछि पुजा आइन मिडियामा, खुल्यो गल्ती कस्को? कहिले गर्दैछन बिहे? सपनाको कुरा आएपछि